कला र मनोरञ्जन, चलचित्रहरू
फिल्म "तपाईंको हेड खोल्न एक लाख डलर" (2014) फ्रेममा धेरै हलिउड स्टारहरू भेला भए र दोस्रो पूर्ण-लम्बाइ निर्देशक सेथ म्याकर्लेनको काम भयो। कुन घटनाको बारेमा चित्र कताईको कथा हो र दर्शकहरूलाई पश्चिमी कमेडी कसरी प्राप्त गरियो?
चित्रको रचना, छोटो कथा
फिल्म "तपाईंको टाउको हराउने एक लाख तरिका" (2014) अमेरिकी एनिमेटर, निर्माता र निर्देशक सेथ म्याकर्लेन को दोस्रो पूर्ण-लम्बाई कार्य हो।
सेथले कार्टूनहरूको विकासकर्ताको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गर्यो। उहाँ sitcoms "परिवार केटा" र "अमेरिकन डैडी" को निर्माता हुनुहुन्छ। केही पछि, सेतेले अन्य भूमिकामा आफैलाई प्रयास गर्न थाले: एक निर्माता, टिभी प्रेन्टेटर, निर्देशकको रूपमा।
पहिलो पूर्ण-लम्बाई हास्य मेकफ्लेले "तेस्रो अतिरिक्त" भनिन्छ। परियोजनामा मुख्य भूमिका मिलिया कुनिस र मार्क वाहलबर्ग द्वारा खेल्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यहाँ "एक मिलियन तरिका ..." परियोजना थियो जसमा सेथले लिपि आफैले लेखे र जसमा उनले नेतृत्व गरे।
पश्चिमी "प्लस लाख ..." - एक असफल किसान अल्बर्ट को साजिश को केन्द्र मा। नायक एक शांत हो जसले आफूलाई र उनको प्रेमिकाको लागि खडा गर्न सक्दैन। त्यसकारण उसले आफ्नो प्रिय लुइस गुमाउँछ, तर चाँडै एक अविश्वसनीय प्रभावकारी अन्नालाई भेट्छ, पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवन र चरित्र परिवर्तन गर्छ।
अभिनेताहरू र चलचित्रको भूमिका "हराएका लाखौं तरिका ..."। सेथ म्याकर्लेन अल्बर्टको रूपमा
एक युग बाट सेन्ट एक विशिष्ट भावना हास्य द्वारा विशिष्ट थियो। विद्यालयको निर्देशक, भविष्यका अभिनेता र निर्देशक अध्ययन गर्दै थिए, उनीहरूको मजाक मूर्ख हुन मानिन्छ। तर, तथापि, म्याकफर्लेन कमिक sitcom द्वारा निर्मित "ग्रिफिन" विश्वभर सबै भन्दा प्रसिद्ध भए र दुई एमी पुरस्कार प्राप्त गरे।
फिल्म "तपाईंको टाउको खोने एक लाख तरिका", जो मुख्य भूमिका चार्ल्सिज थेरोन र म्याकफ्लेले गए, सेठको दोस्रो निर्देशन प्रयोग थियो। यो प्रयोग धेरै सफल भयो, किनभने 40 हजार डलरको लागतमा यो दुई पटक धेरै पैसा उठाउन सम्भव थियो।
म्याकफालनले आफूलाई हारेको भूमिका लिनुभयो, जो रहस्यमय र चौंरी अन्नाको साथमा सामूहिक रूपले परिवर्तन भयो। अल्बर्टको नयाँ साथीले उनलाई झट्याउन सिकाउनुभयो। चाँडै किसानले आफ्नो मजाकिया व्यवहारमा सिद्ध गर्ने मौका पाएका थिए: अन्नाको पूर्व पति शहरमा आए, जसलाई अल्बर्टले लड्न थाल्नेछ।
निमन्त्रणा गरिएका खेलाडीहरू: "तपाईंको टाउको खोल्न एक लाख तरिका" र नायिका चार्लीज थेरेन
चार्लीज थेरोन - हलिवुडको सबैभन्दा असाधारण अभिनेत्रीहरूमध्ये एक। त्यो एक स्वर्गदूत उपस्थिति छ, तर यो सिर्फ सुन्दर केटीहरु को भूमिका मा सीमित छैन। उदाहरणका लागि, चलचित्रमा "दानव" टेरोनले एक सीरियल हत्यारा खेल्नुभयो, जबकि फ्रेममा ग्लैमरको संकेत थिएन।
"असंबद्ध भूमिका" उत्तरी देश "परियोजना मा अभिनेत्री गए। यस फिलिममा, थेरोनले जोसिलाई खेलेका थिए - स्त्री र जसले पहिलो पटक यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध एउटा सानो शहरमा काम गर्न थाले। एक निश्चित प्रयोग "तपाईंको टाउको खोने ए मिलियन तरिका" परियोजना थियो (2014)।
अभिनेता लिम नीयन र चार्लीज थरोन यस जोडी को जोडी मा खेलायो। तथापि, अन्ना केहि कारणको लागि थेरोनको प्रदर्शनमा आफ्नो पति छोडे र एउटा सानो शहरमा गएर जहाँ उनी अल्बर्टको हारे भेटिए। साथै वर्तमान महिलाको लागि आवश्यक छ, अन्नाले वर्तमान मानिसलाई बनाउन को लागी यस्तो नरम शरीरबाट निषेध गरेको छ।
अमांडा सेफिड लुइसको भूमिकामा
फिल्म मा सेथ म्याकर्लाले धेरै प्रतिष्ठित अभिनेताहरुलाई आमंत्रित गरे। "उदाहरणका लागि, तपाईंको टाउको गुमाउने लाखौं तरिका", जवान तारा अमांडा सेफफिडको फिल्मोग्राफीमा प्रवेश गर्यो। केटीले लुइस-अल्बर्टको प्रेमीको भूमिका पाए, जसले उहाँलाई छोडे।
वैसे, अन्डाले 11 बर्षको उमेरमा स्क्रीनमा फ्ल्यास गर्न थाले। उनको पहिलो भूमिका श्रृंखला "सबै मेरो बच्चा" मा थिए र "जबकि संसार घुमाउँदै छ"। सेफिडले 17 वर्षको उमेरसम्म एक मोडेलको रूपमा काम गरे।
अमांडा भाग्यशाली थियो कि तुरुन्तै कमेडी "माइन ग्रिल्स" मा एक प्रमुख भूमिका खेल्न, जहाँ आचरण अभिनेता लिन्डसे लोहान र राहेल म्याकडम्स संग जगेडा भयो। हॉलीवुडमा सेफिडको स्थिति मामा मिया जस्ता परियोजनाहरूमा बलियो बनाइएको छ, जहाँ उनले मेरिल स्ट्रेप र अल्फा कुकुरसँग तारांकित गरेका छन्, जहाँ सेफ्रिडले टाइमबर्कको साझेदार बनेको थियो।
अमानले प्रायः एक मामूली र शर्मीली केटीको छवि प्रयोग गर्दछ। त्यो आत्मविश्वासको आदी छैन, उनीसँग उनको पैसा बक्समा उच्च-प्रोफाइल उपन्यासहरू छैनन्, र उनी उनको खेतमा नि: शुल्क समय बिताउँछन्, जहाँ उनले घोडाहरू भोगेका छन्।
लिन नेसन क्लिनचको भूमिकामा
ब्रिटन लिम नेसन पनि अन्य हलिवुड अभिनेताहरू जस्तै प्रयोगको लागि इच्छुक छन्। "तपाईंको टाउको गुमाएका लाखौं तरिकाहरू" - नेसनको सहभागीको साथको एक मात्र चलचित्र, जुन कमेडीको शैलीमा बनाइन्छ। प्रायः कलाकारले अधिक नाटकीय परियोजना चयन गर्दछ।
कलाकारको लागि पहिलो पटक सफलताको लागि 1 993मा आए, जब उनले फिल्म स्पीलबर्ग "स्किन्डलरको सूचीमा एक प्रमुख भूमिका खेले।" नेसनको नायकले वास्तविक प्रोटोटाइप गरेको थियो - यो एक जर्मन व्यवसायी थियो जसले यहूदीहरूलाई हॉकलोकुस्टबाट बचाउँछन्।
अर्को पटक एनसेन बोल्न थालेपछि, जब "क्वाटर वार्स" मा क्वि-गोन जिनको चित्रमा देखा पर्नुभयो। हलिवुड स्टारको फिल्मोग्राफीमा "ट्याब्स न्यू यॉर्क", "बैटमैन: शुरुवात", "होस्टेज" र "द ब्याट्री अफ द टाइटन्स" पनि देखा पर्दछ।
सेथ म्याकर्लेन को हास्यमा, प्रतिष्ठित अभिनेता क्लिन्च को लेदरवुड - अन्ना को पति को बैंड को खेलयो।
भूमिकाहरूको अन्य कलाकारहरू
परियोजनामा कुन अन्य अभिनेताहरू संलग्न थिए? "तपाईंको टाउको गुमाउनु पर्ने एक लाख तरिका" - टेप जसमा गियोनोनी रिबेसी देखा पर्यो । उनले "X-Files" जस्तै धारावाहिकमा आफ्नो क्यारियर सुरू गरे। उनले sitcom "मित्र" मा फ्रैंक बुफे, जूनियर पनि खेलाए र नाटक "बचत निजी रयान" मा डाक्टर इरविन वेड को भूमिका थियो।
नील पैट्रिक हैरिस, "ह्यू मे मे तपाईंको मातृ," सीरीजको तारा, म्याकफलनले फ्याडको भूमिका पाए। यसको अतिरिक्त, अभिनेता को Smurfs र थ्रिलर "भाग" मा भाग लिया।
रूथ को भूमिका सारा सिल्ल्ल्ल्मनमा गए - सन्तुष्ट र स्टाइल अप कमेडी को अभिनेत्री। सारा को फिलिमोग्राफी मा, परियोजनाहरु "म्यूपेट" र "प्यार / नापसंद" सूचीबद्ध छन्।
बिल मार्चले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई खेल्यो। Mar एकदम बहुमुखी व्यक्ति हो: उहाँ अभिनय, एक आलोचना र लेखकको काम जोड्दछन्।
साथै यो परियोजनामा तपाईंले Wes Studi ("भोल्युनिङको साथ नृत्य"), इवे जोन्स ("8 मील"), रेक्स लिन ("जङ्गो लाइब्रेटेड") र क्रिस्टोफर लोयोड ("ब्याक अपलाईन") देख्न सक्नुहुन्छ।
अन्डेडी ताशकोव: फिल्मोग्राफी, जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
एनिमाइम डी। ग्रे-मेन: फोटाहरूसँग क्यारेक्टरहरू
"हराएको दुल्हन" - चलचित्रको अभिनेता र विशेषताहरू
फिल्म "13 जिल्ला": स्टन्टमेन र कलाकारहरूको अभिनेता
संचालक पावेल लेबेस्वि: जीवनी, रचनात्मक मार्ग
अन्ना रुडनेवा: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
बिक्री लागत को लागि लेखांकन। खाता 44 को विश्लेषणात्मक लेखा
पेट को एन्डोस्कोपी: सङ्केत गर्छ र परिणाम
तुलनात्मक दृष्टिकोण। अचल सम्पत्ति को मूल्य निर्धारण लागि विधिहरू
एमआरआई के हो? एमआरआई स्वास्थ्य को लागि हानिकारक छ?
सागरको किनारमा थोक बिक्रि - यो स्टाइलिश र फैशनेबल छ
चीन मा बिरुवालाई विनाशकारी विस्फोट: गराउनुहुन्छ र नतिजा
एक दराज कसरी जम्मा गर्न: उपयुक्त मोडेल चयन
प्रेममा मेष र मेष को अनुकूलता: यो छ?
परेलाहरु लागि जादू अरंडी तेल। आवेदन र चेतावनी।
बगैचा, पर्यटन, मनोरञ्जनको लागि लामखुट्टे जाल संग पाल